Dịka onye nwe azụmaahịa, enweghị m ike ịgwa gị oge ole m na-abịakwute ya na ohere ịmekwu ego ma ọ bụ abụọ na mgbakwunye mgbakwunye. Ọ bụrụ na m ga-eji naanị ike m rụọ ọrụ ha, ha ga-akwụ m ego. Na, ka emechara, ọ bụrụhaala na mmadụ na-akwụ m ego m na-akpali ime ya… nri? Njọ.
Y’oburu n’ichoo iku-oku iru ulo ahia nke agbakwunyere, dobe onwe gi oge ma jee ebe ndi ozo no. Clickbank, Òtù Ụlọ Ọrụ, ma ọ bụ ihe ndị yiri ya. Ma, anaghị m akụ aka na ụdị ahụ. Ọ na-arụ ọrụ. Ọ bara uru. Ma e nwere ndị nwere nkà ma nwee mmasị n'ụdị ohere ahụ. Ọ ga - eme na ọ bụghị mgbe niile ka ha na ndị nwere azụmaahịa nwere ọganiihu nwere ụlọ ọrụ na - eweta uru ha nwere.
Maka ebumnuche dị iche iche, na-enwekarị ike ịme ihe oyiyi oyiyi, ahịa mmekọ nwere ike ọ gaghị abụ ihe ị na-achọ mgbe niile. Ọ bụ ezie na ọ nwere ike nweta nsonaazụ, ọ nwere ike ị nweta ezigbo aha. Ọ bụrụ na ịchọghị ka ị hụ ngwa ahịa gị na ọtụtụ narị peeji dị iche iche pịakọtara nke nwere ogologo ogologo akwụkwọ, na-agbanye na iyi iyi twitter juputara na njikọ njikọta, ma ọ bụ na-atụgharị uche na ọtụtụ nde mmadụ - yana aha gị na ya - mgbe ahụ ị nwere ike tụlee ụzọ dị iche.
Ihe ịma aka, mgbe ahụ, kedu ka ị ga - esi nweta azụmaahịa "ndị amara" (na m na-eji okwu ahụ azụ oge, ebe m na-apụtaghị na ndị mmekọ nwere aha ọjọọ) na-anọchite anya ngwaahịa gị n'ụdị azụmaahịa na-achọghị mgbanwe? Azịza ya: chọta ihe na-akpali ha.
As Douglas Karr 'gosiri na post na nso nso a, na-ekwu banyere otu vidiyo vidiyo kachasị amasị m, ego anaghị azịza ya mgbe niile. N'ezie, ọ naghị adịkebe. N'ezie, ọ bụ onyinye a na-enye, ọ nweghịkwa ihe ọzọ, na-egbochi m ịtụle onyinye ndị mmekọ. Dị ka a pụrụ isi kwuo ya, ọ na-akparị uru m bara, echiche m banyere onye m bụ na ihe m na-eme, site na iche na enwere m ike ịdọpụ uche m na azụmaahịa m na-eri oge niile site na iji ụzọ aghụghọ dị mfe.
Yabụ, kedu ka isi wuo ihe m kpọrọ "Ahịa Ahịa" - usoro nkesa na-enweghị isi (nke ọzọ, karịa) sophisticated) karịa Mgbakwunye? Kedụ ka ị ga - esi mara ihe ga - akpali onye nwe azụmaahịa ịchọrọ ị ga - eso? Dị Mfe: ọ bụ azụmahịa ha.
Ndị ọchụnta ego na-adọgbu onwe ha n'ọrụ na-etolite ụlọ ọrụ ha na-enweghị njedebe. Ha nwere nrọ ha - ụfọdụ na-akwụ ụgwọ, ụfọdụ na-achọ ọdịmma onwe ha, ụfọdụ na-atọkwa ụtọ ma na-akwụghachi ụgwọ. Ọ bụrụ na ịchọrọ ịbanye na agụụ ahụ ma jiri ya maka uto ahịa gị, ị ga-edozi ha abụọ. Chọpụta otu ị ga - esi tinye ọwa gị ọ bụghị naanị ịgbakwunye ụgwọ ọrụ ole na ole na njedebe ha, mana ọ ga - enyere ha aka ịchụ ahịa ha gaa n’ihe kachasị amasị ha.
You nwere ike ịhụ onye ọrụ a na-arụ ọrụ n'ọtụtụ ụdị ahịa ahịa na-eme nke ọma taa. Dịka ọmụmaatụ, ụlọ ọrụ mgbasa ozi bụ ihe atụ ebe ndị nkwusa na-achọ itinye ihe ntinye, mana ha ghọtara na agụụ maka ụlọ ọrụ ahụ bụ maka ihe okike. Ndị nkwusa na-achọpụta ihe na-eme ka ihe mgbaru ọsọ dịkwuo elu. Ọrụ mbụ m bụ ire ngwanrọ maka Autodesk VAR dị na mpaghara. O juru m anya na ihe kpatara Autodesk ji kwụọ ụgwọ ọnụọgụ abụọ maka ọrụ, rue mgbe m ghọtara na ha chọrọ ịgba ndị ahịa ume n'ụzọ ọ bụla enwere ike ịme VAR mpaghara maka ọrụ. Ọbụna nke m Onye Mmekọ A na-ewube mmemme ahụ n'ihe m mụtara na uru ndị a, yana ndị ọzọ.
Iwulite uzo ahia adighi nfe, o di obere usoro. Ọ bụrụ n'ịchọrọ ọsọsọ ma dịkwa mfe, nweta ndị mmekọ nọ n'akụkụ gị. Ọ bụrụ n’inwere ihe dị n’uche gị karịa ego, mara na otu ahụ ka anyị si eche.
Tags: Mgbakwunye marketingautodeskautodesk irina-ewu ụlọ ahịaụlọ ọwa ahịaọwa ahịaclickbanknkwụsị ọrụ
Ka ekpughe ma dozie Nzuzo
Aug 5, 2010 na 8:39 PM
Akwa post, Nick! Nabata na Blog Technology Technology. Ekwenyere m na otu nnukwu ndudue nke ọtụtụ ụlọ ọrụ na-eme abụghị ịtụle netwọkụ dị egwu nke ndị na-ere ahịa na mmekọrịta ha nwere. Iwulite mmekọrịta ahịa nke a na-akwụghachi ụgwọ site n'aka ndị ị zụtara yana ndị ahịa ị na-arụ ọrụ nwere ike ịmị mkpụrụ karịa ịtufu mmemme mgbakwunye ebe mmadụ anaghị enwe anụ ọ bụla na egwuregwu ahụ.
Aug 12, 2010 na 12:34 PM
Akwa post! N’ụlọ ọrụ anyị, Channel Services Group (CSG) anyị ewepụtala ọtụtụ puku ndị ọrụ ntanetị maka nnukwu ụlọ ọrụ teknụzụ. Iji mepụta ma zụlite ọganiihu, ike, raara onwe anyị nye ụlọ ọrụ anyị achọpụtala na ị na-ewepụta "ndị mmekọ ziri ezi," na-eme ka ihe ịga nke ọma onye ọlụlụ na ijigide itinye aka na-abawanye arụmọrụ ibe ya na omume ọwa.
Mgbe ị na-ewe ndị ọrụ, ndị na-ere ahịa kwesịrị ijide n'aka na ha na-etinye oge ha n'ụzọ amamihe dị na ya site na ịnakọta "ndị mmekọ kwesịrị ekwesị." Anyị ahụla ọtụtụ ụlọ ọrụ na-ekpebi ihe mgbaru ọsọ iji tinye ndị mmekọ maka otu afọ, nweta ihe mgbaru ọsọ ahụ, wee chọta onwe ha otu afọ mgbe e mesịrị site na obere ego ha nwetara site na ndị mmekọ ọhụrụ agbakwunyere. Ndị na-ere ahịa kwesịrị ijide n'aka na ha na-ewe ndị mmekọ nwere ụlọ ọrụ gị na mmasị kachasị mma na nsogbu ma chọọ ịdebanye aha na ụlọ ọrụ ahụ ogologo oge.
Na mgbakwunye, ndị na-ere ahịa kwesịrị ịkwalite ihe ịga nke ọma onye ọlụlụ site na ịkọwapụta ihe kpatara ndị mmekọ nọ na mmemme ahụ. Nke a gụnyere nkwukọrịta dị elu na ndị mmekọ iji zụọ, itinye aka ma duzie ndị mmekọ na mkpọsa ịga ahịa, ndị na-ere ahịa na-akwado mmemme, mkpọsa ihe ọmụma na imezi usoro ahịa ha. N'oge na-adịbeghị anya, anyị dere akwụkwọ ikpe na ROI nke 14X n'ihi iwulite usoro ọwa. I nwere ike ịgụ ya ebe a http://www.csgchannels.com/CaseStudies/case-studies.html.
N'ikpeazụ, ụlọ ọrụ anyị achọpụtala na nnweta dị oke mkpa na iwulite ma na-echekwa ọwa. Nke a gụnyere ịzụlite mmekọrịta ha na ha ma na-achịkwa ihe ịga nke ọma ha. E kwesiri inye ndi ozo ugwo site na mkpali iji mekwuo ebumnuche ulo oru.
Dịka i kwuru, iwulite ọwa ahịa anaghị adị mfe ma ọ naghị arụ ọrụ ọsịsọ, mana ọ nwere ike ịba uru ma baa uru mgbe emechara ya.
Aug 12, 2010 na 3:48 PM
Isi ihe. Ndị enyi ziri ezi abụghị naanị na ha na-arụpụta ihe, ha anaghị enwe ụfụ ụfụ. Enweghị m ike ịkọwa ya, mana achọpụtala m na mgbe mmadụ dabara n'ụdị ahụ nke ọma, ha agaghị enwe ihe mgbu. Nke anyị gbalịrị ịbanye n'ime ihe na-ezighi ezi mechara na-ackingụ oge dị ukwuu.
Ọzọkwa, na-ekwu okwu nke elu-aka mmemme… M gwara ya dị ka nke a: na azụmahịa m, m nwere 17 ahịa na m kwesịrị ijere. Ọ bụ ihe ndabara na m nwere 17 Onye Mmekọ Nye. Ọ bụghị na achọghị m ijere ndị ọrụ 1500 niile ozi, ọ bụ naanị na ọ bụrụ na m jeere ọwa ahụ, ndị ọzọ ga-elekọta onwe ha.